Nantsi indlela ongashushu ngayo ngeNtengiso yeFluencer | Martech Zone
Siye sabhala ngaphambili malunga nemigibe yentengiso yempembelelo. Njengomntu ohlawulwa amaxesha ngamaxesha njenge nefutheNdiyathandabuza ukuba zingaphi iimpembelelo kubudlelwane bentengiso obusetiweyo.
Kwimeko apho, ebutsheni balo nyaka ndiye ndamenyelwa kwi Indawo yezitena kuba ndingowasekhaya nefuthe kwimidiya yoluntu. Kwakukho iqela labantu ababemenyiwe kwimithombo yeendaba zentlalo-bonke benamanqaku aphezulu kwimpembelelo eyaziwayo yokufaka amanqaku kwiinjini Indianapolis. Umkhondo ubonelele ngeendawo zokupaka kunye namatikiti esuti kwaye baphuma bonke nomnyhadala. Khange ndiye-bendinengxabano ngomzuzu wokugqibela.
Omnye wabahlobo bam waya wahamba waqhula ngendlela, ngesinye isihlandlo, umqhubi odumileyo wayehamba ngakubo kwaye kungekho namnye owaziyo. Enjani yona into! Iphulo lempembelelo elilahlekileyo kuzo zonke iisilinda (liyifumene?) Kwaye ndizamile ukunxibelelana nomkhondo umzuzu endimenywe ngawo ukuba ndiqiniseke ukuba abayichithanga imali yabo. Akukho namnye owakha wanditsalela umnxeba kwakhona. Ndide ndaya kumsitho apho ndacela khona ixesha nomntu ophambili onceda ukukhuthaza umkhondo… naye wandikhupha.
Kukho izinto ezi-3 ezithile zempumelelo iqhinga lokuthengisa elinempembelelo kwaye eli phulo libaphose bonke:
Ngaba abaphulaphuli bomdlalo wempembelelo abaphulaphuli ozama ukufikelela kubo? Umkhondo bekungangcono kakhulu ukumema abantu abanabalandeli abali-100 abanomdla wokubaleka kunam onabalandeli abangama-30k endingenalo nofifi lokuba kukho ukhathalelo malunga nokubaleka kuba andikhe ndithethe ngokubaleka.
Ngaba bekukho ibali lokuba nefuthe lokwabelana nabaphulaphuli babo abanokuphinda bavakale? Ukubonisa, ukutya ukutya simahla, ukusela ibhiya, kunye nokuya kwingoma yasimahla ayisiyondaba. Bekuya kuba yinto entle ukuba nengoma ithethe ngonxibelelwano losapho, imbali, abaqhubi, itekhnoloji… nantoni na ngaphandle kwemifanekiso yebhiya.
Ngaba bekukho biza isenzo ukulinganisa ifuthe ngephulo? Kulungile, ke kusenokwenzeka ukuba kwabakho ispike kwisabelo-selizwi ngaloo mini kuba bonke aba baphembeleli bezentlalo bathetha ngeBrickyard. Haha! Ndiyadlala ngokupheleleyo - kwakungekho spike kuba kwakusele kukho amakhulu amawaka abalandeli bokwenyani ababethetha ngogqatso! Aba bashukumisi abatshintshanga kwanto.
Ukuba injongo yayikukufumana abantu abavela ngaphandle kwe fan eqhelekileyo baye kwingoma, ayincedanga. Khange ndilive ibali ebelinyanzela…. enyanisweni ndeva ALIKHO bali ngaphandle komhlobo wam owayehleka ngokufumana itikiti lasimahla. Amabali afuna ukuxelelwa kufanele ukuba ahambelane nawo amaqhinga abophelela kwisigqibo sethu sokuthenga.
Kuninzi kakhulu okunokwenziwa ukubamba abantu benokuphendula abatyelele apho. Mhlawumbi incwadana yokubamba inkomfa yabo elandelayo yentlalontle, mhlawumbi ikhowudi yesaphulelo yokwabelana nabantu malunga nomkhondo, mhlawumbi uluhlu lweetweets, uhlaziyo kunye neefoto zeefoto ezilungelelanisiweyo ukuzibandakanya nabasebenzisi malunga namabali wokuba kutheni kufuneka behambile kwingoma, zeziphi izehlo ezizayo kwaye uza kuthenga phi amatikiti.
Ukuba uza kuhlawula okanye unike into kubaphembeleli, qiniseka ukuba izakusebenzela! Andiphikisani nentengiso yempembelelo konke konke, kukuba akukho lula njengokujonga abachaphazeli kwindawo ethile kwaye ubalahle onke amatikiti asimahla. Oku kunokuba ngcono kakhulu!
tags: izitenaindianapolis ubuhlangampe mbeleloukuthengisa okunempembelelokloutumkhondo wohlanga
Ngaba uyawazi umahluko phakathi koTyikityo lweDijithali kunye noTyikityo lwe-E?